खेलकुद – Patrika Nepal
पत्रिका नेपाल - साफ च्याम्पियनसिपको उपाधि जित्ने नेपालको लक्ष्य अधुरै भएको छ। साफ च्याम्पियनसिप २०२१ को फाइनलमा भारतसँग पराजित भएपछि नेपालको लक्ष्य पूरा हुन नसकेको हो। शनिबार माल्दिभ्सको राजधानी मालेमा भएको साफको उपाधि भिडन्तमा नेपाललाई ३-० गोलले पराजित गर्दै भारतले आठौं पटक उपाधि जित्यो। भारतले आठौं पटक उपाधि जित्ने क्रममा तीनै गोल दोस्रो हाफमा गर्‍यो। दोस्रो हाफमा भारतले एक मिनेटको अन्तरमा दुई गोल गरेपछि नेपाल दबाबमा परेको थियो। खेलको ४९ मिनेटमा भारतका लागि कप्तान सुनील क्षेत्रीले पहिलो गोल गरे। उनले प्रितम कोटलको क्रसमा हेडमार्फत गोल गरे। सुनीलले साफ च्याम्पियनसिप २०२१ मा पाँच गोल गर्न सफल भए। ५० मिनेटमा भारतले अग्रता दोब्बर पार्‍यो। सुरेश सिंहले भारतका लागि गोल गरे। मोहमद यासिरले उपलब्ध गराएको पासमा सुरेशले गोल गरे। भातरका लागि तेस्रो गोल अब्दुल समादले गरे। उनले दोस्
पत्रिका नेपाल - अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट संन्यास घोषणा गरेका पारसलाई पत्रकारहरूले राजनीतिमा आउनेबारे जिज्ञासा राखेका थिए। जवाफमा पारसले अवसर आए पछि नहट्ने बताए। 'अवसर आउँछ भने म पछि हट्दिनँ', पारसले भने, 'सही अवसर आए म त्यसबारे सोच्नेछु। मेरो सहभागिताले कस्तो असर पार्न सक्छ भन्ने हिसाबले मैले जहिल्यै आफूलाई तुलना गरेको छु। यदि म कुनै पार्टीसँग जोडिएर नेपाललाई कुनै न कुनै तरिकाले 'भ्यालु एड' गर्न सकेँ भने म तयार हुनेछु। पारसले तत्कालका लागि भने आफूले क्रिकेटको व्यवस्थापनमा आउन चाहेको खुलाए। राजनीतिमा आउनुअघि क्रिकेट व्यवस्थापनलाई कुनै ठाउँमा पुर्‍याउन चाहेको उनले बताए। 'अन्तर्राष्ट्रिय खेल जीवन सकिएपछि व्यवस्थापनमा आऊँला वा पदाधिकारीमा आऊँला, कोषाध्यक्ष होऊँला वा अध्यक्ष होऊँला। तर ममात्र भएर हुन्न अहिलेको स्टक होल्डरहरूले पनि उत्तिकै जिम्मेवारी लिनुपर्नेछ', पारसले भने,
मन्त्रालयकै गाडी भित्र यौन क्रियाकलाप गर्ने3जना पक्राउ (5474)
किन गर्दैछन् त स्वतन्त्र युवा विद्यार्थीहरु धनगढीमा MCC बिरुद्ध कार्यक्रम ? (795)
बिजय शाहि जिउँदै भेटिए (675)
जनमैत्री अस्पताल मेरो होईन- रबि लामिछाने (591)
अफगानिस्तानको राजधानी काबुलको मुख्य द्वार प्रवेश गर्ने बित्तिकै खुशीले भक्कानीए तालिवान लडाकु ( भिडियाे सहित ) (448)
असुरक्षित अफगानिस्तानमा सुरक्षा प्रदान गर्दै नेपाली गार्ड (425)
केही कुरा याद हुँदैन ? यी आठ तरिकाले बढाउनुहोस् दिमागको क्षमता (387)
एम्बुलेन्स सञ्चालन भद्रगोल : निर्देशिका गज्जबको, कार्यान्वयन भेट्टाउनै गाह्रो ! (319)
विद्यालयमा चोरी गरेको आरोपमा तीनजना प’क्रा’उ
भारतीय गुम्बामा लैजाँदै गरेका २९ नेपाली बालकको उद्धार
गाउँकै बिहेमा पनि हेलिकोप्टर चाटर्ड, देख्ने सबै दंगै
१.	सल्यानमा दुई भाउजू मिलेर मध्यरातमा आफ्नै देवर’लाई….. (101)
२.	चितवनमा इतिहाँसमै सवैभन्दा वढि क’ण्डम, ग’र्भनि’रोधक अस्थायी साधनको माग (75)
३.	आहा ! भगवान् बिनोदलाई यसरी `आइ लभ यु ´ भन्दै भेट्न बोलाउदै अनिता (हेर्नुस् भिडियो ) (72)
४.	हार्दिक बधाइ रमेश प्रसाइ बुबा बने बधाई दिनेको घुइँचो। (71)
५.	अब यस्ता व्यक्तिहरु अब विदेश जान नपाउने (66)
६.	२ भाउजू मिलेर गरे देवरको ह’त्या, घ’ट’ना लुकाउन रातारात शव जलाइयो (61)
७.	८० वर्षकि हजुरामा टिकटकमा यसरी छमछम नाच्नुहुन्छ; हेरौं उहाँका रमाइला टिकटक भिडियो (भिडियो सहित) (61)
८.	बाँदरको मृ:त्यु’ले गाउँनै शो’क, हिन्दु परम्परा अनुसार गरियो अन्त्येष्टी (59)